Naseho ny : 28 septambra 2020
Nanenina izy ka nandeha ihany
Alahady 27 septambra 2020 — Herinandro faha-26 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 21, 28-32 — Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, hoy ny Tompo. Tsy misy afaka mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako.
Tsy maintsy hatolotra... ny Zanak’Olona.
Sabotsy 26 septambra 2020 — Herinandro faha-25 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masinahy Lioka 9, 44b-45 — Omeo fahalalana aho, ry Tompo, hitandremako ny lalànao ary hanarahako azy amin’ny foko tontolo.
Ianao no Kristy Zanak’Andriamanitra...
Zoma 25 septambra 2020 — Herinandro faha-25 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 9, 18-22 — Sokafy, ry Tompo Andriamanitra ny fonay, mba hitandremanay ny tenin-Janakao.
Pejy 9 amin'ny 82